Alaskan Malamute - toetra
Trano Pets allowed
Alaskan Malamute dia alika amboadia. Lehibe izy ireo, mety hahatratra 50 kilao ny lanjany. Ireo alika ireo dia tsy mahagaga, fa tena tsara tarehy.
Famaritana momba ny zaridaina Alaskan Malamute
Araka ny hevitr'ilay anarana, dia nentina tany Alaska ny alikana malamute, ary io zary io dia nahazo nalaza tahaka izany ho lasa tandindon'ny tanindrazany. Ary io dia aseho amin'ny karazany roa: Kotzebue sy Mlut, izay kely dia kely, manana loko maitso, akaikin'ny amboadia, ary ny faharoa dia azo avy amin'ny karazana hafa, avy amin'ny fotsy madio ho fotsy miaraka amin'ny mainty na manga.
Fikarakarana sy fikarakarana ny Alaskan Malamute
Ny fikarakarana lehibe amin'ity alika ity dia amin'ny dia lavitra matetika, satria toy ny karazan-trondro rehetra, malamutes dia tena mahery. Mila sakafo kely ry zareo saingy mila mandinika amim-pitandremana ny habetsany ianao: ny biby an-tsahan'ahiahy dia hihinana izay rehetra omenao azy, satria tsy misy ny fahatsapana fihinana. Noho io antony io ihany, tsy maintsy manafina ny sakafo isika, ary azo antoka fa tsy tokony hamela azy ireo eo ambony latabatra isika.
Ao amin'ny trano, ny Alaskan Malamute dia hahatsapa ho ampy tsara raha azo atao ny mitsidika ny arabe. Tena ilaina tokoa ny mampiasa biby fiompy noho ny tanjona tiany, izany hoe, ny fiara, na farafaharatsiny mba hiara-miasa aminy. Matetika ireny alika ireny dia voatazona ao amin'ny trano fonenana izay ahafahana manamboatra trano iray. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy vonona amin'ny asa tena tiany ny olona iray - ny tany. Tiany fotsiny ny mihady lavaka, ka noho izany, ny tranokalanao dia afaka mivadika haingana any amin'ny toeram-ponenana, ary amin'ny faharoa, eo amin'ny paiso sy ny volon'ondry dia hitondra volabe marobe ao amin'ny trano. Ny volon'ondry amin'ny ankapobeny dia ho maro, indrindra mandritra ny moult, satria ireo alika ireo dia natao hanamafisana ny trano ary manana dantelina tena goavana.
Alaskan Malamute - Fanabeazana
Ny toetran'ny malamute dia tsara fanahy. Ireo biby ireo dia tena sariaka sy tia milalao, toy ny miaraka amin'ny fianakaviana ary mandray anjara amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaha rehetra. Ireo toetra amam-panahy ireo no mahatonga azy ireo mpitily tsy misy ilana azy, fa ireo tsara tarehy sy namana kosa. Na izany aza dia mety hanjary henjana ihany koa ny malamita raha tsy tezitra izy ireo na manambany fotsiny, ary mampiseho ny sainy hendry.
Ny fampiofanana an'i Alaskan Malamute dia mampiseho ny tena zava-dehibe, ny zava-dehibe - ny mamolavola ny endri-javatra sasany amin'ny toetrany. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny hampiseho ilay puppy fa ianao no lehibena eto, fa tsy izy. Ny ekipany dia mianatra haingana sy mahafinaritra, kanefa izany no antony tsy ahafahan'izy ireo mankatò azy ireo foana - amin'ny ratsy tsy misy. Noho izany, manàna faharetana ary miezaha hampitombo ny karazana fampiofanana, dia ho tsara ny vokatra.
Milbemax ho an'ny alika
Ahoana no handrefesana ny hafanan'ny saka?
Ahoana ny fomba hanononan'ny hamsters zazalahy iray?
Dzhungariki - fikarakarana sy sakafo
Ahoana no hikolokolo ny salohim-bary?
Ahoana no hamantarana ny taonan'ny puppy?
Ahoana no hifehezana ny nifinao?
Fitaovana ho an'ny akoholahy
Ahoana no mampivelatra ny alika?
Clicks amin'ny Boy Herin'ny Aterineto
Heaterana ho an'ny akquarium miaraka amin'ny thermoregulator
Dzhungariki - ohatrinona ny fiainan'izy ireo?
Ny fihenan'ny hormonina amin'ny zaza vao teraka
Ireo zanakavavy Reese Witherspoon sy Michael Jackson dia nanova ny loko volom-borona
Inona no tokony hiresahana amin'ny lehilahy?
Fomba ahoana no hampiato ny fitiavana ny lehilahy manambady - toro-hevitra amin'ny psikology
Accessories ho fampakaram-bady photosession
Gyuvech - recipe
Aprikose liqueur ao an-trano
Fampihenana ny asidra ao amin'ny vavony - soritr'aretina
Oscar-2016 - ny asa fitoriana tsara indrindra
Fitahirizana fitaovam-piadiana madinika - soritr'aretina, fitsaboana, zava-mahadomelina
Fampisehoana ho an'ny ankizy
Ny kitapon'ny vehivavy vita amin'ny hoditra marina
Impiry impiry moa ny manondraka raozy amin'ny fahavaratra?
Sakafom-boankazo ao anaty lafaoro
Trends Fashion-Winter 2012
Elektrika manify ho an'ny tokantrano
Fitsaboana adnexitis - fanafody